ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် အမျိုးသားကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yu Zheng Sheng နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | NLD
Home Hluttaw News ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် အမျိုးသားကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yu Zheng Sheng နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Posted By: mygate wayon: September 11, 2017 In: Hluttaw NewsNo Comments
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက် အမြဲတမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Zhang Dejiang ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါလျက် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီချိန်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပြည်သူ့ခန်းမ ဆောင်ကြီး၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် အမျိုးသားကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yu Zheng Sheng နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်း၊ လွှတ်တော်အချင်းချင်း၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မှုများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ တရုတ်- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှတဆင့် နှစ်နိုင်ငံ အတူ တကွ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော မန်းညွန့်သိန်း၊ ဦးသန်းညွန့်၊ ဦးခွန်သန်းထူး၊ ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်း၊ ဦးတင်နု (ခ)ဦးတင်နုအောင်၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၊ ပွညျသူ့လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမွငျ့ တရုတျပွညျသူ့နိုငျငံရေးအတိုငျပငျခံကှနျဖရငျ့ အမြိုးသား ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ H.E. Mr. Yu Zheng Sheng နှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ အမြိုးသားပွညျသူ့ကှနျဂရကျ အမွဲတမျးကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ H.E. Mr. Zhang Dejiang ၏ ဖိတျကွား ခကျြအရ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ပကေငျြးမွို့သို့ ခဈြကွညျရေး ခရီး ရောကျရှိနသေော ပွညျသူ့လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမွငျ့ သညျ လှတျတျောရေးရာ ကျောမတီ အဖှဲ့ဝငျမြား လိုကျပါလကျြ စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ ညနေ ၃ နာရီခြိနျတှငျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတ နိုငျငံ၊ ပွညျသူ့ခနျးမဆောငျကွီး၊ အစညျးအဝေး ခနျးမ၌ တရုတျပွညျသူ့နိုငျငံရေးအတိုငျပငျခံကှနျဖရငျ့ အမြိုးသားကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ H.E. Mr. Yu Zheng Sheng နှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဥျ နှဈနိုငျငံအစိုးရအခငျြးခငျြး၊ လှတျတျောအခငျြးခငျြး၊ ပွညျသူအခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ရေးမှုမြား တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေး၊ တရုတျ- မွနျမာ နှဈနိုငျငံ ဘကျစုံမဟာဗြူဟာမွောကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးမှ တဆငျ့ နှဈနိုငျငံ အတူတကှ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဥျမြား တှငျ ကူညီ ဆောငျရှကျပေးရေးတို့နှငျ့ စပျလြဥျး၍ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးကွသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ ပွညျသူ့လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌနှငျ့အတူ လှတျတျောရေးရာကျောမတီ အဖှဲ့ဝငျမြားဖွဈကွသော မနျးညှနျ့သိနျး၊ ဦးသနျးညှနျ့၊ ဦးခှနျသနျးထူး၊ ဒျေါဝငျ့ဝါထှနျး၊ ဦးတငျနု (ခ)ဦးတငျနုအောငျ၊ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးသဈလငျးအုနျး နှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျောရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။